Karnalikhabar » आजको हाम्रै साझा पत्रिकामा के छापियो ? आजको हाम्रै साझा पत्रिकामा के छापियो ? – Karnalikhabar
आजको हाम्रै साझा पत्रिकामा के छापियो ?
प्रकाशित मिति :2017-08-13 03:10:35
बाढीका कारण देशभर ठूलो जनधनको क्षति, कञ्चनपुरमा पनि उर्वरभूमी क्षयीकरण बढ्यो
कर्णाली न्युज समाचारदाता
पुनर्वास – शनिबारको अविरल बर्षाका कारण देशका देशभर बाढी पहिरोले बितण्डा मच्चाएको छ । तराईका धेरैजसो ठाउँ जलमग्न भएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, दाङ, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ ।
देशैभर बाढीपहिरोले धनजनको क्षति गरिरहँदा लगातारको वर्षाको कारण कञ्चनपुरमा भने उर्वरभूमी क्षयीकरण भइरहेको छ । यहाँका विभिन्न नदी, खोला, नाला खहरे खोलामा आएको बाढिका कारण उर्वरा भूमी मन्द गतिमा कटानी भइरहेको छ । दोदा, चौधर, सुनबरा, स्याली, झर्नाखोला, मछेली कामिकाटे, खहरे लगायतका खोलानालामा आएको बाढिले उर्वरा जमिन क्षयीकरण हुन लागेको हो ।
दोदा नदीका कारण पुनर्वास नगरपालिका, लालझाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका बढि प्रभावित भएका छन । दोदाले कटानीका साथै गाउँमा बाढी लाग्ने समस्या छ । दोदा नियन्त्रण नहुँदा त्यहाँका स्थानीय उच्च जोखिममा छन् । लालझाडीका स्थानीय कल्लु रानाले दोदाले लालझाँडी गाउँपालिका–२ का स्थानीय माधव राना, कटवारी राना, निर्मल राना, श्रीकृष्ण राना लगायतका स्थानीयको झण्डै डेढ विगाह जमिन कटानी गरेको बताए । बर्षात शुरुवात देखि साउन तेस्रोसाता सम्ममा दोदाले उक्त क्षेत्रमा कटानी डेढ विगाह जमिन र त्यसमा उत्पादन गरिएको धानखेती बगाएको छ । नदी नियन्त्रण नहुँदा बेलौरी नगरपालिका ५ का साथै लालझाँडी गाउँपालिका पुरै जोखिममा रहेको स्थानीय बताउछन् ।
जिल्लाको उत्तरी चुरे र दक्षिणी समथर तराईको भू–भाग वर्षातले कटानी गरिरहेको छ । नदीखोलामा पानीको सतह घट्ने बेला क्षयीकरण हुन लागेको स्थानीले बताएका छन् । सार्वजनिक, निजी तथा सरकार जमिन क्षयीकरण भइरहेको छ । चुरे भएर बग्ने झर्नाखोलामा आएको बाढिका कारण बेलौरी र बेल्डाँडी क्षेत्रको जमिन कटानी गरेको छ ।
यस वर्ष पनि झर्नाखोलामा पानीको सतह घट्दै जाँदा दायाँबायाँको जमिन कटानी भइरहेको स्थानीय दिपक जोशीले बताए । उनका अनुसार खोलाको किनार क्षेत्रको जमिन विस्तारै कटानी भइरहेको छ । झर्नाखोलाका कारण बेलौरी नगरपालिका ९ र बेल्डाँडी गाउँपालिका १ उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । कटानी रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण झर्नाखोलाले वर्षनी उचो उर्बरा जमिन कटानी र होचो भूमी सिमसारमा परिणत गरिदिएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष शिवराज पनेरुले सुनबरा नदीमा आएको बाढिले नदी किनारका ६ स्थानीयको जमिन कटानी गरेको बताए । सुनबराले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ क्षेत्रका स्थानीयको जमिन कटानी गरेको उनले बताए । अध्यक्ष पनेरुका अनुसार हरिदत्त भट्ट ५ कट्टा, प्रेम बोहरा ३ कट्टा, नवराज बोहरा ५ कट्टा, लप्टन ढडौरा ५ कट्टा, किरण ढगौरा २ र प्रेम सार्कीको २ कट्टा जमिन सहित धानखेती समेत बगाएको छ । यस्तै चौधर नदीले बेदकोट नगरपालिका–४ सार्कीपार्की टोल, सुनार टोलमा कटानीका साथै त्यहाँको बस्ती समेत उच्च जोखिममा परेको छ । वेदकोटका स्थानीय राजुराम सार्कीले चौधर नदीमा आएको बाढीका कारण डेढ सय परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा आज भारत प्रस्थान हुँदै : ६० जना जाँदैछन् भारत
अब सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा नि:शुल्क